Malunga neVenkile yokuHamba isitayile-Indawo yakho yokuQala yokuLuka isitya kunye neZinxibo ezifikelelekayo
Isekwe eNew York, iVenkile yeRave Shop yenziwa ngaphandle komdla oboniswe ngabalandeli bethu be-Instagram, abasoloko bebuza malunga nendawo yokuthenga imbonakalo ye-chic esabelana ngayo nabo.
Emva kwabo bonke abantu abanxibe kakuhle, kukho i-stylist okanye ezimbini emsebenzini. Kwaye kwiStayile Rave, sikholelwa ukuba uyinkwenkwezi kwaye thina sisylylist yakho yedijithali. Sikwakholelwa ekubeni yimfashini yeyona ndlela ilulamileyo yokuzibonakalisa. Ke ngoko ngononophelo siqhelanisa iziqwengana zefashoni ezikunceda ufezekise isitayile esiqinisekisiweyo seRaven ujonge ngaphandle. Cinga iziqwenga ezenziwe ngokukodwa ezifuna umgudu omncinci kuwe ngokubukhali kunye nokuzithemba okuqinisekisiweyo.
KwiSitayile Rave, sikholelwa ekubeni nesibindi kunye nokulandela into etshisa umphefumlo wakho. Ke yeyiphi indlela ebhetele yokuzixhobisa ngokulandela iinkanuko zakho kunokuba wenze iziqwenga ezihle ezixelela umhlaba ukuba ungubani [umxhasi-ngaphandle] ngaphandle kokuthetha nelizwi.
Ukujonga okumangalisayo akuhlukile kwisayizi enye; ke sijonge ukunika uluhlu olubanzi lweesayizi. Ingqokelela yethu ibonakalisa ukuzibophelela kwethu ekusebenziseni imfashini njengesixhobo sobandakanyo. Kuba akukho Zimbini iiRegs ziyafana, ke ngoko senza konke okusemandleni ethu ukuze silungiselele incasa yeentlobo zethu zokuqonda zohlobo lweeRavens zethu. Ukusuka kwiingubo ezinemikhondo ukuya kwiziqwenga ezingaphelelwa lixesha, ukubukeka okuqhelekileyo kwisehlo kunye nokunxiba kwepati, iimpahla zemidlalo zanamhlanje ukuya kwishishini eliqhelekileyo, ungalindela ukufumana iziqwenga ezisemgangathweni ezibonakalisa imiba eyahlukeneyo yobomi bakho kwaye ihlale ixesha elininzi.
Okokugqibela, sifuna ukuba abathengi bethu bonwabe! Ukuzama izixhobo, dlala ngemibala njengoko ufumana imbonakalo yakho yokwenyani!
Thenga imbonakalo oyithandayo!
Xha ga mshelana + 1 (516) 808-8795 okanye i-imeyile: shop@stylerave.com
Ukuze ufunde ngeMigaqo-nkqubo yeNkonzo yaBathengi, Cofa apha.
Ukubona iimpendulo kwii-FAQ zethu zokuHambisa kunye nokuHanjiswa kwee-FAQ, Cofa apha.
Ivenkile yeRave Shop x weCare Africa
Ngokusebenzisana kwethu WeCare Africa, ipesenti yomyalelo wakho esiya ekufundiseni imali yabantwana kwimimandla esezilalini yaseAfrika.